मेसीको हालसम्मकै ४ उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन -बिगुल न्यूज
मेसीको हालसम्मकै ४ उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन
बार्सिलोना (एजेन्सी) – अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोली तथा युरोपकै महारथी क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीलाई सर्वकालिन महान खेलाडी भन्ने धेरै छन् । अंग्रेजीमा एउटा शब्दावली नै प्रख्यात छ, गोट अर्थात् ‘ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम ‘।
मेसीले १७ वर्षको उमेरदेखि आफ्नो व्यवसायिक फुटबल करियर शुरु गरेका थिए । १४ वर्ष पछि उनको प्रदर्शनले उनलाई वर्तमान अवस्थामा विश्वकै उत्कृष्ट मध्यका एक खेलाडी बनाइसकेको छ । यसदौरान धेरै पटक उनले खेल जिवनमा असम्भव कार्य सफल गर्दा आफुलाई अब्बल तुल्याएका छन् । उनले खेल जीवनमा गरेका चार यस्ता प्रदर्शन जसले उनलाई स्टार खेलाडीको स्थानमा सिद्ध पार्छ :
म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्ध सन् २०११ को च्याम्पियन्स लिग फाइनल
उक्त मेसी उच्च लयमा हुन्छन् उनको तुलना गर्न लायक सायदै कोहि हुन्छ । जब उनको खुट्टामा बल हुन्छ उनको गति र प्रवाह कहिल्यै दोस्रो हुदैनन् । सन् २०११ मा म्याचेस्टर युनाइडेडविरुद्ध उनले पूरा ९० मिनेट युनाइटेडको रक्षापंक्तिलाई त्रसित पारे । उक्त खेलमा मेसीको प्रदर्शन अदभुत थियो । डिफेन्सले कल्पना भन्दा पनि बाहिर थियो । त्यसबेला युनाइटेडको डिफेन्समा नेम्नाजा भिडीच र रियो फर्डीनान्डको दिग्गज जोडी थियो ।
रियल म्याड्रिडविरुद्ध सन् २०११ च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल
सन् २०११ मा च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलदौरान स्यान्टियागो बर्नाबेउमा रियल मड्रिडविरुद्ध लियोनल मेसीले गरेको गोललाई कसैले भुल्न सक्दैनन् । उनले सम्बह्व्त च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा सबैभन्दा रोचक गोल गरे । उनले म्याड्रिडका पाँच जना खेलाडीलाई बिट गर्दै गरेको त्यो गोल प्रतियोगिताको इतिहास बनेको छ । रियलका गोलकिपर इकर कासिलास समेत उक्त बल रोक्न असफल भएका थिए । त्यो एक खेल थियो जहाँबाट मेसीले अर्को स्तरको उडान भरे । उनको प्रतिभासँग अन्य कसैको प्रतिभाले मेल खाएन । हालसम्म पनि उनलाई चुनौती दिने कमै खेलाडी अगाडी आएका छन् ।
सन् २०१२ का मेसी
मेसीले सन् २०१२ वर्षभर ९१ गोल गरे । एकै वर्षमा ९१ गोल गर्नु चानचुने सफलता हैन । सन् २०१२ मा मेसी उत्कृष्ट मात्र थिएनन् अविश्वसनीय नै थिए । उनले गरेको प्रदर्शन असम्भवप्राय नै थियो । यहाँसम्मकी उनको नजिक रहेका रोनाल्डोले वर्षभर मेसीभन्दा ३० गोल कम गएका थिए । यसले पुष्टि गर्छ कि मेसीले उक्त सिजन अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेका थिए । सायद मेसी आफैं पनि उक्त प्रदर्शन दोहोर्याउन सक्दैनन् ।
युभेन्ट्सविरुद्ध सन् २०१५ च्याम्पियन्स लिग फाइनल
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा युभेन्ट्सविरुद्ध मेस्सीको प्रदर्शन यस्तो थियो की उनी एक्लैले विपक्षी टोलीलाई खेल अवधिभर दबाबमा राखे । तर, पनि सबै जनाले उनलाई जितको श्रेय दिएनन् । किनकी मेसीले खेलमा गोल गरेका थिएनन् । खेल अवधिभर विपक्षी टोलीलाई उनले राखेको दबाबकै कारण त्यो खेलमा उनी बार्सिलोनाका लागि जितको आधार भए । सो खेलमा नेयमार र लुइस सुआरेजले गोल गरेका थिए । उक्त खेलमा बार्सिलोनाले युभेन्ट्सलाई ३–१ ले पराजित गर्दै पाँचौ पटक युसीएल उपाधि जितेको थियो ।
विद्यालय निर्माणका लागि नेपाली समाज टेक्सासको नौ लाख सहयोग
कांग्रेसका यी ठूला नेताको राजनीतिक भविष्य समाप्त, अब चुनावमा को–को उम्मेदवार बन्न नपाउने भए ?
काठमाडौँ महानगरको ताजा मत परिणाम, बढ्दै छ कांग्रेस र एमालेको अन्तर
युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइने–नेता लालबाबु पण्डित
स्व. प्रकाश दाहालकी पत्नी बीना मगर तेब्बर मतान्तरले अगाडि
कालीगण्डकी र मोदीमा बाढी अाए पूर्वसूचना दिने मेसिन जाेडियाे